Tababare Arsene Wenger Oo Cadho Wayn Kala Dul Dhacay Garsoorka Premier League Kadib Rekoodhihii Uu Mike Dean Ku Abaal Mariyay West Brom – GOOL24.NET
Tababare Arsene Wenger Oo Cadho Wayn Kala Dul Dhacay Garsoorka Premier League Kadib Rekoodhihii Uu Mike Dean Ku Abaal Mariyay West Brom
Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa cadho wayn ka muujiyay go’aankii uu garsoore Mike Dean xiliga danbe rekoodhaha ugu abaal mariyay kooxda West Brom kadib markii ay kubbadu ku dhacday gacanta Calum Chambers. Wenger ayaa sheegay in heerka xirfada garsoorka Premier League ay tahay mid aan sare u kicin.
Kooxda West Brom ayaa goolka barbaraha keensatay daqiiqadii 89 aad ee dhamadkii kulankii ay labada kooxood dhibcaha qaybsadeen iyada oo Calum Chambers lagu ciqaabay in ay kubbadu gacanta kaga dhacday wuxuuna Wenger ku dooday in go’aanka Mike Dean uu boqolkiiba boqol qalad ahaa.
Arsene Wenger oo xili ciyaareedkan cabadho badan ka muujiyay qaladaad uu sheegay in kooxdiisa laga galay ayaa sheegay in ay wax niyadjab ah ahayd isla markaana ayna wax la aqbali karo ahayn in kubbadii gacanta Calum Chambers ku dhacday rekoodhe laga dhigay.
Arsene Wenger oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Waa wax niyadjableh in aad aragto, laakiin maxaad samayn kartaa? Waad hadli kartaa, hadli kartaa, hadli kartaa, laakiin ma jirto wax ay badalaysaa”.
Wenger ayaa sheegay in uu hore ugu soo dadaalay in gudoomiye ku xigeenkii hore ee FA-ga ee David Dein uu sare u qaado heerka garsoorka wuxuuna yidhi: “Waxaan doonayaa in aan xusuusiyo in aan si adag ula soo dagaalamay David Dein sanado badan ka hor in garsoorayaashu noqdeen xirfadleyaal laakiin heerkoodu aanu nasiib daro sare u kicin”.
Markii Arsene Wenger la waydiiyay haddii go’aankii Mike Dean uu boqolkiiba boqol qalad ahaa oo aanu Calum Chambers ciqaabta uu maray mutaysan ayaa yidhi: “Haa fikradayda. Waa wax adag in la aqbalaa. Waa wax ka adag go’aanka ku lug lahaa isla markaana ma aha markii ugu horaysay ee ay dhacday. Waxaa ugu fiican in aanaan ka hadlin. Anagu si qodo dheer ayaanu u ognahay waxa socda isla markaana waa in aanu la tacaalno oo kaliya”.
Arsene Wenger ayaa sidoo kale sheegay in uu soo dhawaynayo muuqaal caawiyaha garsooraha ee VAR kaas oo dhacdooyin lagu ogaan karo wuxuuna yidhi: “Waa waqtigii, anigu ma garanayo sababta aynu u doonayno in aynu noqono horyaalka aduunka ugu fiican ee aynu waqtigan dheer u sugayno iyada oo haddaba horyaalada kale ay isticmaalayaan”.